Amazwibela oSuku Lwabazali lonyaka wezi-2018.
INyuvesi YaKwaZulu-Natali ibambe imicimbi Yosuku Lwabazali emaKolishi amane esikhungo.
Le micimbi ebanjwa kuwo wonke amakhempasi ase-UKZN minyaka yonke, isebenza njengongosi lapho abasebenzi baseNyuvesi bexhumana nabazali babafundi abazoqala izifundo zabo zonyaka wokuqala. Abasebenzi basebenzisa lokhu kuxhumana ukuze banikeze ulwazi ngezinsiza ezibalulekile zabafundi ngesikhathi besasesikhungweni sase-UKZN.
Kule micimbi abazali baphinde baziswe ngezibonelelo zemifundaze ekhona nezinye izibonelelo ezitholakalayo.
Iphini LikaSekelashansela NeNhloko eliyibamba eKolishini LezesiNtu uSolwazi Stephen Mutula ukhulume nabazali ekhempasini yaseMgungundlovu lapho ethe ‘iNyuvesi izibophezele ekuhlomiseni abafundi ngemfundo efanele endaweni evundile ngobunyoninco.’
NgokukaNkk Gloria Mkhize, iKolishi LezesiNtu liyiKolishi elifanele indodakazi yakhe, uZinhle, ebhalisele iziqu ze- Bachelor of Social Science. ‘Le ingenye yamaNyuvesi aphambili ezweni lonke. Ngiyazi ukuthi uzofunda lukhulu, kusho uMkhize.
Imali yokufunda, izindawo zokuhlala kanye nokubhalisa kube izihloko ekuxoxwe ngazo kabanzi emcimbini Wosuku Lwabazali weKolishi Lezifundo ZoMthetho NezokuPhatha. Bekukhona abazali abangamakhulukhulu abaziswe ngokuthi iKolishi lizobalekelela kanjani izingane zabo uma sezenza izifundo zazo e-UKZN.
Ekhuluma nabazali nabafundi esikoleni sezoMthetho, iSekelashansela noMphathi uDkt Albert van Jaarsveld ukhuthaze abafundi ukuthi basebenze kanzima futhi basebenzise wonke amathuba abazali babo abangawatholanga.‘Ngenkathi nisekhempasini, nikhethe abangani benu ngokucophelela futhi niqinisekise ukuthi niyasithokozela isikhathi senu ekhempasini. Ngeke niphinde nilithole ithuba nenkululeko yokukhulu njengomuntu nesakhamuzi edlula le eninayo manje,’ usho kanje.
EKhempasini yase-Westville inkulumo yethulwe yiPhini LeSekelashansela NeNhloko YeKolishi Yezezifundo ZezoMthetho NokuPhatha, uSolwazi Nana Poku kanye neDini eyiNhloko YeSikole SezokuPhatha, UbuChwepheshe NokuBusa uSolwazi Betty Mubangizi.
UPoku uqinisekise abazali ukuthi izingane zabo zikhethe kahle ngokukhetha isikhungo esisezingeni lomhlaba njenge-UKZN. ‘Ingane yakho izofunda eNyuvesi engagcini nje ngokuba lapha kodwa esezingeni lomhlaba. Asigcini ngokukhiqiza abafundi abaneziqu kodwa sikhiqiza isizukulwane esilandelayo sabaholi, osozimboni nabahlinzekeli besizwe,’ usho kanje.
UMubangizi utshele abazali ngokwakheka kweKolishi nolunye ulwazi olubalulekile oluqukethwe umhlahlandlela wabazali kanti abebemele iminyango yezokwesekwa kwabafundi, owezokufunda nokufundisa nowezimali zokufunda, bakhulume ngezindlela okwesekwa ngazo abafundi.
Omunye umzali obethokoze kakhulu uMnu Nkosinathi Ntanzi, uthe unethemba lokuthi indodakazi yakhe uNqobile uzophumelela ezifundweni zakhe abe ummeli.Umeluleke ngokuthi asebenzise isikhathi sakhe esiningi ezincwadini zakhe futhi asebenze kanzima..
Babalelwa e-1 400 abazali nabafundi abebehambele umcimbi wabazali nabafundi waseKolishi LezoLimo, LezobuNjiniyela NezeSayensi (CAES) lapho bemukelwe ngezandla ezifudumele abasebenzi beZikole zonhlanu kanye nabasebenzi bezokuphatha, ezokusekwa kwabafundi, ezezimali zokufunda, abezokuphepha kanye nezezindawo zokuhlala. Inkulumo ngempilo yasenyuvesi ilethe ukukhululeka nokuphela kokwesaba ngenxa yezinkulumo ezethulwe ngendlela enobungani futhi enika ulwazi oluningi.
Iphini LikaSekelashansela eliyibamba uSolwazi Albert Modi wamukele abazali ekhempasini yaseMgungundlovu; e-Westville umphathi wohlelo uSolwazi Neil Koorbanally ukhuthaze abafundi abebenovalo ngokuqala izifundo zabo, kanti inkulumo kaSolwazi Bala Pillay iqinisekise abazali nabafundi ngokuthi i-UKZN iyisikhungo esiphambili. USolwazi Ademola Olaniran ukhulume ngesakhiwo seKolishi nolwazi ngeziqu, uDkt Neeshi Singh-Pillay ukhulume ngezokwesekwa kwabafundi ezitholakala eKolishi, UMnu Sizwe Sithole ukhulume ngezindlela ezihlukene zokusizwa ngezimali zokufunda.
I-CAES yenze imizamo yokufaka nolimi lwesiZulu ezinkulumweni zokwamukela futhi beyinotolika abahlanganisa nabafundi asebeneziqu abebekhona belekelela ngezinkulumo nangesikhathi s emibuzonezimpendulo.
Abazali baphawule ngokuthi lo mcimbi ubenze banokuqonda ngokufanele bakwenze ukuze balungiselele izingane zabo, ubahlinzeke ngolwazi oluwusizo kakhulu, wabacacisela ngohlelo lwaseNyuvesi waphinde wakhombisa nosizo olutholakalyo lwabazali nezingane.
‘E-UKZN sizimisele ngezokufunda nokufundisa futhi sinenhlanhla yokuba nothisha abazinikele abenza okungaphezulu kokubekiwe ukuze bahlinzeke abafundi ngesimo sokufunda esisezingeni eliphezulu,’ kusho iPhini LeS ekelashansela uBusi Ncama ngenkathi ethula inkulumo yakhe yokwamukela abazali nezingane eKolishi Lezifundo ZezeMpilo.
Wengeze ngokuthi : ‘Ukungena eNyuvesi YaKwaZulu-Natal kunzima kakhulu futhi sinomlando wokuheha abafundi abaphambili abaphuma ezikoleni zasemadolobheni nasemaphandleni.’.
UNcama uqinisekise abazali ukuthi bathathe isinqumo esifanele ngokubhalisa izingane zabo enyuvesi esihlale endaweni yokuqala eNingizimu Afrika ngokomkhiqizo wezocwaningo iminyaka eminingi.
‘Sikhiqiza abasunguli bangempela. Abantu abazozibuza ngomhlaba futhi babheke ngaphakathi kubona ukuze bawuguqule ube ngcono.’
Amagama: nguMelissa Mungroo, Thandiwe Jumo, Sithembile Shabangu, Nombuso Dlamini, Christine Cuenod